Yintoni oza kunxiba ukuya emngcwabeni ebusika: Iingubo ezimnandi - Ukungcwaba Nokutshiswa
Yintoni oza kunxiba ukuya emngcwabeni ebusika: Iingubo ezimnandi
Ukwazi into yokunxiba emngcwabeni ebusika kunokuqinisekisa ukuba uhlala ushushu kwaye ukhululekile ngelixa uhlonipha kwaye uhlonipha ongasekhoyo. Bhrawuza imifanekiso yengubo yomngcwabo kunye nemibono yamadoda okanye yabasetyhini ukufumana ukhetho olusebenza ngeempahla osele unazo.
Iingcamango zengubo yomngcwabo wasetyhini wasebusika
Oko umfazi afanele ukukunxiba kumngcwabo wasebusika kwahluka kuphela kwizimbo nakwizixhobo kunoko kunxitywa ngabafazi ukuya emingcwabeni ngamanye amaxesha onyaka. Uya kufuna ukuqinisekisa ukuba ushushu kwaye unxibe izihlangu ezisebenza ukuhamba kwikhephu okanye kumkhenkce. Yonke impahla yomngcwabo yasebusika inokusebenzisa idyasi kuba unokuchitha ixesha elininzi ngaphandle. Gcina umbala omnyama, o-navy oluhlaza okwesibhakabhaka, okanye wamalahle e-grey edreyini kwikhabhathi yakho kuzo zonke iintlobo zetheko, kubandakanya imingcwabo.
Yintoni oza kunxiba kumngcwabo ehlotyeni: Izimvo eziyi-8 zempahla
Imibongo emi-5 yeentlobo ezahlukeneyo zoMngcwabo
Isuti yeepant lukhetho olucacileyo kwimingcwabo yasebusika kuba igubungela iingalo nemilenze yakho. Bhangqa i-suit kunye nejezi ye-turtleneck kunye nezihlangu ezivaliweyo okanye iibhutsi ukuze uhlale usebenza.
Ubude obuphakathi okanye iSuti yeXabiso eLide
Ukuba ukhetha izikethi ngaphezu kweebhulukhwe, usenganxiba isiketi ebusika. Khetha isiketi esibetha ezantsi kwedolo, etholeni, okanye emaqatheni ukuze uhlale ushushu. Bhangqa isiketi kunye ne-blouse, ibhatyi yesuti, iithayithi kunye nezihlangu ezivaliweyo okanye izihlangu ezide.
Isinxibo esimdaka ngeXabiso
Ingubo ende enemikhono emide isebenza kakuhle nasemingcwabeni. Ufuna ilokhwe eqhelekileyo, eqinileyo enombala engazukujongeka isesikweni kakhulu. Yongeza isikhafu semfashini ngombala omnyama usebenzisa enye yezininzi iindlela zokuthwala isikhafu ukufudumeza nokunxiba iimpahla. Yongeza iithayithi kunye nokukhetha izihlangu ezinobusika.
izinto zokuthetha ngesithandwa sam
Ukunxiba ijezi ngemilenze kunye neebhutsi
Iingubo zejezi ngemibala emnyama zilungele imingcwabo yasebusika. Bhangqa ilokhwe eneebhulukhwe ezimnyama kunye neebhutsi ezimnyama ezinde ukugqibezela ukubukeka kobusika.
Isinxibo eside esineeTight
Ukuba kuphela kwempahla enemikhono emnyama enemikhono emide ubude okanye mfutshane kancinci, yidibanise neethayithi ezifudumeleyo okanye iileggings ebusika. Bhangqa iimpahla kunye neebhutsi okanye iiflethi ezintle ezivaliweyo.
Iingcamango zamadoda zokuNgcwaba ebusika
Njengabafazi, into enxitywa ngamadoda emngcwabeni wasebusika ayisiyiyo yonke into eyahlukileyo kwinto abayinxiba emngcwabeni ehlotyeni, entwasahlobo, okanye ekwindla. Amadoda anganxiba iimpahla zokunxiba, njengeebhatyi zepea, njengempahla yangaphandle okanye ukusebenzisa idyasi yabo yezemidlalo okanye ibhatyi yesuti njengengubo yabo yangaphandle.
Suit Ngaphandle Tie
Imibala emnyama enxitywe emngcwabeni inika nayiphi na isuti imvakalelo esesikweni ngakumbi, ke iqhina linokutyhala ingubo iye kummandla osesikweni kakhulu. Nxiba isuti yakho emnyama eneehempe ezinamaqhosha amnyama, kodwa ulahle iqhina. Bhangqa iimpahla kunye nezihlangu zokunxiba okanye izihlangu zokunxiba.
Ihembe elinemikhono emide enemikhono emide
Ukuba uceba ukunxiba idyasi, ungaphulukana nengubo yezemidlalo okanye idyasi yesuti. Bambisa iibhulukhwe ezimnyama kunye nehempe emnyama yeqhosha-elinemikhono emide. Ingubo iya kujongeka isesikweni ngakumbi ukuba ungena kwihempe kwaye unxibe ibhanti entle. Kulungile ukunxiba iibhulukhwe ezilula ukuba kuko konke onako, qiniseka nje ukuba ihempe, ibhanti nezihlangu zakho zimnyama.
Ukuba ufuna ukufudumala ngokwenene, unokukhetha ijezi entle. Bhangqa iblack yakho emnyama kunye nejezi emnyama. Ngobushushu obongezelelekileyo, unxiba ihempe enamaqhosha phantsi kwejezi.
I-Slacks ene-Shirt-Up Shirt kunye neCardigan
Ukuba ufuna ukhetho lokwenza isinxibo sakho kwiqondo lobushushu njengoko usuka ngaphakathi uye ngaphandle, i-cardigan lukhetho olukhulu. Kwakhona, uya kunxiba iibhulukhwe kunye nehempe enamaqhosha njengesiseko sengubo yakho. Phosa i-cardigan emnyama kwaye ucofe kuyo yonke indlela ukuze ujongeke ngokusesikweni.
I-Button-Up Shirt eneMbatho yeMidlalo kunye neeJeans ezimnyama
Amadoda anokuhamba nge-jean emngcwabeni ukuba nje ijean zihlamba ezimnyama kwaye zikwimeko entle ngaphandle kweenyembezi okanye amabala. Ukwenza oku kukhangeleka kusebenza, ubhangqa ijini ngehempe enamaqhosha efakiweyo, ibhanti entle, idyasi yezemidlalo okanye idyasi yesuti, kunye nezihlangu zokunxiba.
buthini ubunzima obuphakathi bendoda eneminyaka eli-15 ubudala
Iingcebiso ngengubo yoMngcwabo wasebusika
Isinxibo esifanelekileyoeyamadoda nabasetyhini ibandakanya ukunxiba kwishishini nje ukunxiba iimpahla ezimnyama. Ukujonga ukuba impahla yakho ifanelekile na emngcwabeni, qiniseka ukuba ilandela imigaqo embalwa engathethwayo.
Hlulela kumbala omnyama kunye nothulileyo onje ngombala omnyama, ongwevu, okanye umbala oluhlaza okwesibhakabhaka njengombala wakho ophambili.
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, ongwevu, kunye ne-navy yonke imibala emnyama engathathi hlangothi onokuyidibanisa neminye imibala emnyama enje ngeplantshi emfusa, umzingeli oluhlaza, okanye imaroon.
Khangela iziqwenga eziza kukugcina ufudumele, ungqimba xa kukho imfuneko.
Ngelixa ufuna ukunxiba izihlangu ezintle, ukhuseleko lubalulekile. Ukuba ufuna ukutshintsha izihlangu xa ufika kwikhaya lokungcwaba, kulungile.
Ngayo nayiphi na imisebenzi yomngcwabo ongaphandle, qiniseka ukuba izixhobo zakho zasebusika njengeiglavu, izikhafu kunye neminqwazi ziyimibala emnyama nayo.
Yintoni ongayinxibi ukuya kumngcwabo wasebusika
Ukwazi ukuba unganxibi ntoni emngcwabeni kubaluleke kakhulu njengokuqonda ukuba uza kunxiba ntoni. Ngokubanziisimilo somngcwaboibonisa ukuba kuya kufuneka uphephe nantoni na eqaqambileyo okanye etyhilayo.
Musa ukunxiba iibhutsi ezimdaka zasebusika. Ukuba ufuna ukunxiba iibhutsi zakho zasebusika ukhuseleko, ubuncinci ubanike ukucoca kuqala.
Sukuveza ulusu oluninzi. Kumadoda, ihempe kufuneka zigubungele isifuba sakho. Kubafazi, thintela uninzi lwe-cleavage ukuba unganceda.
Musa ukunxiba ibhola. Imingcwabo isesikweni kwaye ufuna ukugqunywa ukufudumala, kodwa iingubo azifanelekanga.
Nxiba umngcwabo ebusika
Njengoko unxiba umngcwabo, khumbula eyona nto iphambiliUmahluko phakathi kokuvuka nomngcwabongokwempahla okhetha ukuyikhetha kukuba yamkeleka ngakumbi kunxiba ngokungakhathali ekuvukeni. Nokuba unekhephu okanye amaqondo obushushu abandayo kwingingqi yakho, ukugcina intuthuzelo kubalulekile, nkqu nasemingcwabeni.
Uqhawulo Mtshato Ngurhulumente Halloween Costumes Iikhompyuter Ne Software Isifrentshi Isigama Ne Ukuguqulelwa Celiac Disease
ubuthatha njani ubushushu bezinja zakho
ivithamini yamanzi zero pros and cons
Ngaba i-mcdonald's chicken nuggets gluten simahla
isoda yokubhaka kunye neviniga ekujuleni
zeziphi iimpawu ezihambelana nazo